Hawlgelinta | New City School
Waxbarashada Su’aal weydiinta
Ardayda waxee bartaan marka ay si firfircoon uga qaybqaataan sahamin iyo dhismaha aqoonta. Sidaas darateed barashada waa firfircoon, cayaar ah oo waxtar leh si ay ardayda u tahay in ay baaritaan ku fikraaan maaddooyinka oo dhan. In la sameeyo xirfadaha ee sarrifka caqliga, weydiinta su’aalaha iyo wadahadal yihiin in cayil iyo ku dhaqanka. Intaa waxaa dheer, fursad inay dib u eegaan oo ay qiimeyn shaqada la siiyaa ardayda maalin kasta, si ay u caadiystaan dib u eega milicsiga , astaamaha of fikirka muhiimka ah. Tusaale: Markii ay baartaan habka tamarta qoraxda, ardayda waxee suubinaayaan meerayaasha iyaga oo sifooyin gaar ah. Ardayda dugsiga Dhexe waxee la imaanaayaan su’aalo la xariira arrimaha dhallinyarada iyo mashruucyada cilmi -dhaqanka. Ardayda fasalka Saddexaad waxee sameenaayaan tijaabo saynis iyo marti-qaadayaa xubnaha bulshada barashada.
Waxabarashada isku dhexdarka cashirada
Fikradaha waxee ubaahanyihiin awood isku xireyso xaqiiqooyinka, fikradaha, iyo xirfadaha ee qof fahamsiinayso dunida. manhajka iskuul New City waxaa loogu tala galay ​​sahaminta mawduuca badan oo kala duwan. Macallimiintu waxee u diyaariyaan fasalladooda cashiro la xiriira waxabrasha dugsiga oo dhan. Waxay qorsheeyaan halbeeg tixgeliyaan xirfadaha iyo fikradaha loo gu talagalay fasal gaar ah. Macallimiintu waxay qoraan su’aalaha hagaya halbeega oo na caawiyaan caruurta waxabarashadooda iyo ee raadiyaan jawaabo muhiim ah. Tusaale ahaan: waxbarashada “Dareenka waqtiga iyo meesha” Karla Bisco waxee usuubisay ardayda fasalka 3aad iyo 4aad cashir sahamiyey magaalada Minneapolis iyo magaalooyinka kale ee American. Cashirka waxaa ka mid eh joqraafiga, gaadiidka, dhuleedyada taariikhi ah, dawladaha magaalada iyo taariikhda magaalada.
Si ay uga qayb qaataan, dhaqanka ah oo lagu magacaabo Dooro Waxbarashada aan isticmaalaan. Casharka Dooro Waxabarashada, ardayada waxay leeyihiin fursad ay u doortaan barashada. Marka hore ardayda iyo macalimiinta wee qorshaynta. Marka ardayda ay qorsheenaayaan waxbarashadooda, waxay dooranaayaan nooca mashruuca la sameeyo, meesha ay u shaqeeyaan, agabka loogu baahanyahay shaqada, iyo cidda ay la shaqayn doonaan. Markaas, waxay leeyihiin waqti ay ku shaqeeyaan. Iyadoo ardayda madax bannaan u shaqayn, macallinka wuxuu la kulmay ardayda qof qof ahaan ama la shaqeeyaan kooxaha yar oo arday ah. Casharka wuxuu ku dhamaanayaa milicsiga oo ku saabsan wixii la bartay iyo doorashooyin ka la sameeyey.